मानसिक शक्ति बढाउन दैनिक गर्नुपर्ने यी ६ अभ्यास
Home mental health मानसिक शक्ति बढाउन दैनिक गर्नुपर्ने यी ६ अभ्यास
बिहिबार, मंसिर ९, २०७८ १२:१५
—जब मैले पहिलोपटक प्रयोगशालामा एक स्नायु वैज्ञानिकको रूपमा ‘चिन्ता’को अनुसन्धान सुरु गरेँ, मैले आफूलाई चिन्तित व्यक्तिको रूपमा कहिल्यै सोचिनँ। मैले वर्षौंको दौरानमा के फेला पारेको छु भने चिन्तासँग लड्ने सबैभन्दा शक्तिशाली उपाय भनेको तपाईंको लचिलोपन र मानसिक शक्ति निर्माणमा निरन्तर काम गर्नु हो।
१) सकारात्मक परिणामहरू कल्पना गर्नुहोस्
प्रत्येक दिनको सुरुवातमा वा अन्त्यमा तपाईंको जीवनमा हाल भइरहेका सबै अनिश्चित परिस्थितिहरू सोच्नुहोस्, चाहे ती परिस्थिति ठूला हुन् या साना। के मैले आफ्नो कामको राम्रो समीक्षा पाउन सक्छु? के मेरा बच्चा नयाँ विद्यालयमा राम्रोसँग पढ्न पाउँछन्? के अन्तर्वार्तापछि मैले जागिर पाएको खबर सुन्न सक्छु? अब ती मध्ये प्रत्येक कारणलाई लिनुहोस् र तीमध्ये सबैभन्दा आशावादी र अचम्मको नतिजाको कल्पना गर्नुहोस्। “ठीक’’ नतिजा मात्र होइन, तपाईँले उत्तम नतिजा कल्पना गर्न सम्भव छ।
२) चिन्तालाई प्रगतिमा बदल्नुस्
—रिसले तपाईंको ध्यान र प्रदर्शन गर्ने क्षमतालाई रोक्न सक्छ। वा यसले तपाईंलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ; आफ्नो ध्यान तेज गर्न र महत्वपूर्ण कुराको स्मृतिका लागि।
—डरले विगतका असफलताहरूको सम्झनाहरू निकाल्न सक्छ। आफ्नो ध्यान र कमजोर प्रदर्शनलाई सम्झाएर ‘फोकस’ लुट्न सक्छ। अथवा यसले तपाईँलाई निर्णयहरुको बारेमा अधिक सावधान बनाउन सक्छ; आफ्नो प्रतिबिम्ब गहिरो र दिशा परिवर्तन गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्धत गर्छ।
—चिन्ताले तपाईँलाई लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने बाटोमा ढिलो पुर्‍याउन सक्छ। वा यसले तपाईँलाई तपाईँको योजनाहरू राम्रो–ट्युन गर्न मद्दत गर्न सक्छ; आफ्नो अपेक्षाहरु समायोजन र अधिक यथार्थवादी र लक्ष्य उन्मुख बनाउँछ।
३) केही नयाँ प्रयास गर्नुहोस्
— नयाँ अनलाइन कक्षा लिन, स्थानीय खेलकुद क्लबमा सामेल हुन वा भर्चुअल कार्यक्रममा भाग लिन पहिलेभन्दा सजिलो छ। केही समय अघि, म इन्स्टाग्राम लाइभमा विम्बल्डन च्याम्पियन भेनस विलियम्ससँग जोडिएँ जहाँ उनले वर्कआउट गरिरहेकी थिइन्। मैले पहिले कहिल्यै त्यस्तो काम गरेको थिइनँ। यो एक शानदार र अविस्मरणीय अनुभव भयो। मेरो बिन्दु यो हो कि निःशुल्क (वा केवल एक सानो शुल्क) तपाईँले आफ्नो दिमाग र शरीरलाई केही प्रयास गर्न धक्का दिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले पहिले कहिल्यै सोच्नु भएको थिएन। यो तपाईँको स्तरभन्दा माथि वा तपाईँको कम्फर्ट जोन भन्दा अलि बाहिर केही हुन सक्छ।
४) सम्पर्कमा रहनू।
५) सकारात्मक आत्म–ट्वीट अभ्यास गर्नुहोस्
लिन–म्यानुअल मिरान्डाले प्रत्येक दिनको सुरु र अन्त्यमा पठाउने ट्वीटहरूको बारेमा एउटा पुस्तक प्रकाशित गरे। त्यसमा उनले अनिवार्य रूपमा उत्साहित साना सन्देशहरू जुन हास्यास्पद तथा सामान्यतया रमाइलो खालका हुन्छन्, समेटेका छन्। यदि तपाईंले उहाँको अन्तर्वार्तामा हेर्नुभयो भने तपाईंले स्वाभाविक रूपमा मानसिक रूपमा बलियो र आशावादी व्यक्ति पाउनुहुनेछ। तपाईं कसरी त्यो लचिलो, उत्पादनशील र रचनात्मक हुन सक्नुहुन्छ?
६) आफैँलाई प्रकृतिमा डुबाउनुहोस्